भारतले मागेजति पेट्रोलियम पदार्थ दिन थाल्यो - Himalayan Kangaroo
भारतले मागेजति पेट्रोलियम पदार्थ दिन थाल्यो
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ आश्विन २०७२, बुधबार ०१:५६ |
काठमाडौँ । अघोषित नाकाबन्दी भारतले खुकुलो बनाउँदै गएपछि नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण बढ्दै गएको छ ।
मंगलबार मात्र एक सय ३४ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले मंगलबार मात्रै एक सय ३४ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ र २८ बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिएको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थका ट्यांकर नेपाल भित्रिने क्रम बढेको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘डिजेल र पेट्रोल क्रमश: १०५ र २९ ट्यांकर भित्रिएका छन्,’ महानिर्देशक ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भन्सार नाकाबाट २८ बुलेट खाना पकाउने ग्यास नेपालतर्फ आएको छ । पेट्रोलियम आउने क्रम बढेको छ ।’ भारतसँगको अधिकांश नाकाबाट आयात सहज भएको छ ।
तर, वीरगन्ज भन्सार नाका भने ठप्प छ । वीरगन्ज भन्सारले राजस्व संकलनको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रवेशका लागि हजारौँ पेट्रोलियमका ट्यांकर तथा ग्यास बुलेट र मालवाहक सवारीसाधन रोकिएका छन् । महानिर्देशक ढुंगानाले वीरगन्ज भन्सार खुलाउन भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए ।
Previousअबको राष्ट्रपति सुवास नेम्वाङ कि विद्या भण्डारी ?
Nextप्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ओलीले घर किने
नेपाल दक्षिण एसियाको चौथो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा यथावत
१८ आश्विन २०७४, बुधबार ०१:१६
संगल सिम लाग्ने स्मार्टफोनबाटै यसरी चलाउँनुस् दुईटा सिम
५ भाद्र २०७३, आईतवार ०७:०५
साउनदेखि आन्तरिक उडानको हवाई भाडा ४३ प्रतिशतसम्म बढ्ने
१८ असार २०७३, शनिबार ०६:३७
एनसेललाई कर नतिर्न उचाल्ने उच्च सरकारी अधिकारी को थिए ?
२७ बैशाख २०७३, सोमबार ०१:३४
दशैंमा लगाइने जमराको यस्तो छ विशेषता
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ३ हजार ९३ संक्रमित, ८ को मृत्यु
बच्चालाई मोबाइल दिने गर्नुहुन्छ ? एक बच्चीले आमाको नाङ्गो फोटो खिचेर सबैलाई पठाइन् !
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक महिलामाथि पूर्व प्रेमीद्वारा छुरा प्रहार, घटनास्थलमै मृत्यु
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नको सडकमा महिलाहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति पक्राऊ